DA-BC37001 2020 Cunto karinta kulul ee lagu kariyo Shiinaha
DA-BC13001 birta makiinada wax lagu kariyo ee 2020 iibinta kulul oo tayo sare leh
Faa’iidooyin badan ayaa ku jira ku kariska qalabka wax lagu kariyo ee birta lagu kariyo. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ah inaad saliid yar ku kariso mar haddii aad kureyso xawaash wanaagsan oo ku jirta qalabka wax lagu karsado. Tani waxay u oggolaaneysaa cunnooyinka dufanka yar iyo saliid yar si loo gaaro qolof dusha sare oo bunni ah. Faa'iido kale ayaa ah in marka la isticmaalayo birta wax lagu kariyo ay birtu si dabiici ah ugu xoojiso cunnooyinkaaga birta. Intaa waxaa sii dheer tani waa bedel kiimiko ah oo aan aheyn kiimikooyin dheeri ah oo aan dheg laheyn sida Teflon ama Ceramic
DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 birta kabka ee 2020 iibinta kulul ee lagu sameeyay Shiinaha